चन्द्रमाको आन्दोलन: महत्त्व र परिणामहरू नेटवर्क मौसम विज्ञान
विश्लेषण पछि पृथ्वीको चाल र यसका परिणामहरू हाम्रा लागि छन्, हामी यसलाई विश्लेषण गर्नेछौं चन्द्रमा को चालहरु। चन्द्रमा हाम्रो प्राकृतिक उपग्रह हो र यो परिक्रमण पनि गर्दछ र आफैंमा घुमाउँदछ। यससँग भएका विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू र पृथ्वीको सम्बन्धमा यसको स्थितिको नजिकको वा दूरीले दिन, दिन, हप्ताहरू, महिनाहरू र वर्षको समयावधि निर्धारित गर्दछ र ठूलो रूपमा ज्वार.
तसर्थ, यस लेखमा हामी गहिराइमा अध्ययन गर्नेछौं जुन चन्द्रमाको चाल हो र यसले पृथ्वीमा जीवनलाई कस्तो असर पार्दछ।
1 चन्द्रमामा कुन चाल हुन्छ?
2 चन्द्र परिक्रमण र अनुवाद
3 चन्द्रमाको आन्दोलनको नतीजाहरू
4 चंद्र लिब्रेसन
चन्द्रमामा कुन चाल हुन्छ?
चन्द्रमा र पृथ्वीको बीचमा गुरुत्वाकर्षण आकर्षक शक्ति भएकोले यस उपग्रहको प्राकृतिक चालहरू पनि छन्। हाम्रो ग्रह जस्तै, यो दुई अद्वितीय आन्दोलनहरू भनेर चिनिन्छ यसको आफ्नै अक्षमा रोटेशन र पृथ्वीको वरिपरि कक्षामा अनुवाद। यी आन्दोलनहरू ती हुन् जुन चन्द्रमाको चरित्र हो र ज्वारसँग सम्बन्धित छ चन्द्र चरणहरू.
उहाँसँग भएका विभिन्न आन्दोलनहरूको क्रममा, ती समाप्त गर्न केहि समय लिनुहुन्छ। उदाहरण को लागी, पूर्ण अनुवाद मोडमा औसत २ 27,32..XNUMX२ दिन लाग्छ। यसले बनाउँदछ, उत्सुकतापूर्वक, चन्द्रमाले सधैं हामीलाई उस्तै अनुहार देखाउँदछ र पूर्ण रूपमा स्थिर देखिन्छ। यो असंख्य ज्यामितीय कारण र चन्द्र लिबरेशन नामक आन्दोलनको अर्को प्रकारले हो जुन हामी पछि हेर्नेछौं।
जब पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुम्छ, चन्द्रमाले यो पनि गर्दैछ, तर पृथ्वीमा, पूर्व दिशामा। पृथ्वीमा चन्द्रमाबाट यसको चालहरू बीच दूरी धेरै भिन्न छ। ग्रह र उपग्रह बीच दूरी 384 400०० किलोमिटर छ। यो दूरी पूर्ण रूपमा भिन्न हुन्छ यो क्षणमा जुन यो यसको कक्षामा छ। कक्षा एकदम भ्रामक र कहिलेकाँही रिमोट भएको कारण सूर्यले यसको गुरुत्वाकर्षण शक्तिसँग पर्याप्त प्रभाव पार्छ।
चन्द्रमाको नोडहरू तय गरिएको छैन र १.18,6..8,85 प्रकाश वर्ष टाढा सार्दछ। यो कारण यो छ कि चंद्र अण्डाकार स्थिर गरिएको छैन र चन्द्रको पेरीजी turn.XNUMX बर्षको प्रत्येक पालोको लागि देखा पर्दछ। यो परिधि तब हुन्छ जब चन्द्रमा पूर्ण चरणमा हुन्छ र यसको कक्षाको नजिक छ। अर्कोतर्फ, एपोजी हुन्छ जब यो कक्षाबाट टाढा हुन्छ।
चन्द्र परिक्रमण र अनुवाद
हाम्रो घुमाउने उपग्रहको आन्दोलन अनुवादको साथ सिnch्क्रोनाइज गरिएको छ। यो २.27,32..XNUMX२ दिनसम्म रहन्छ, त्यसैले हामी सधैं चन्द्रमाको उही पक्ष देख्छौं। यो साइडरेल महिना को रूपमा परिचित छ। यसको घुमाउने आन्दोलनमा यसले अनुवादको अण्डाकारको विमानको सन्दर्भमा .88,3 XNUMX..XNUMX डिग्री झुकावको कोण बनाउँछ। यो गुरुत्वाकर्षण शक्तिको कारण हो जुन चन्द्र र पृथ्वीको बीचमा बन्छ।
पृथ्वीमा यसको अनुवादन गतिमा, यो गोलाकारको सन्दर्भमा झन्डै degrees डिग्री झुकाव हुन्छ। यो आफैंमा पूरा पालो समान बनाउनको लागि लिन्छ। ग्रहको वरिपरि यो विस्थापन भनेको वर्तमानमा हामीसँग रहेको विभिन्न ज्वारभाँट गठन गर्दैछ।
चन्द्रमाले गर्ने अन्य आन्दोलन त्यो क्रान्ति हो। यो सूर्यमा चन्द्रमामा रहेको परिक्रमाको बारेमा हो। यो आन्दोलन हाम्रो ग्रहको संयोजनमा गरिन्छ, किनकि यो आफैंमा घुम्छ र पृथ्वीको वरिपरि कक्षामा सर्छ।
चन्द्रमाको आन्दोलनको नतीजाहरू
यी चन्द्र आन्दोलनको परिणाम स्वरूप, हामीसंग केही प्रकारका महीनाहरू छन् जुन तपाईंले सुन्नुभएको हुन सक्छ तर धेरै परिचित छैन। हामी तिनीहरूलाई एक एक गरी तपाईंको व्याख्या गर्न गइरहेका छौं।
Sidereal महिना। यो एक हो जुन २ days दिन, hours घण्टा, minutes 27 मिनेट र ११ सेकेन्डमा रहन्छ। यस महिनामा चन्द्रको चरण पूरा सर्कल पूरा भएपछि देखा पर्दछ। घन्टा सर्कल आकाशीय क्षेत्र मा अधिकतम छ।
सिनोडिक महिना। यो समय हो कि यसले दुई बराबर चरणहरू पार गर्दछ र सामान्यतया २ 29।। दिनहरू रहन्छ। यसलाई लुनेशनको नामले पनि चिनिन्छ।
ट्रपिक महिना यो त्यतिखेर हो जहाँ मेचको बिन्दुको घेरामा चन्द्रमा पछि दुई चरणहरू छन्। यो सामान्यतया २ 27 दिनसम्म रहन्छ।
असामान्य महिना। यो २ 27 दिन र १ hours घण्टा सम्म चलिरहन्छ र त्यो हो जब पेरिजमा दुई लगातार चरणहरू हुन्छन्।
Draconic महीना यो एक चरणबाट अर्को चन्द्रमा चढ्ने समय हो जुन चढ्ने नोडको माध्यमबाट जान्छ। यो २ 27 दिन र hours घण्टा लामो हुन्छ।
यो एक चन्द्रमाको आन्दोलन हो जसद्वारा हामी केवल यसको सतहको %०% वा समान अनुहार देख्न सक्दछौं। त्यहाँ, बारी मा, लिब्रेसन को तीन प्रकारहरु छन्। हामी तिनीहरूलाई गहिरो विश्लेषण गर्ने छौं।
अक्षांश मा लिब्रेसन। यो चन्द्रमाको कक्षा र अण्डाकारको जहाज बीचको झुकावसँग सम्बन्धित छ। यसले एकै समयमा चन्द्रको उत्तर र दक्षिण मात्र देख्न सक्दछ। चंद्रको भूमध्यरेखाको प्लेनको प्वाइन्ट कक्षाको प्लेनको माथि र तल छ। यसले हामीलाई ग्यारेन्टी दिन्छ कि विपरीत ध्रुवीय क्षेत्रबाट अवलोकन गर्न त्यहाँ अझ सतहहरू छन्।
डेटाइम लिब्रेसन यस भागमा यसको धेरै चीजको स्थिति हुन्छ जहाँ अब्जर्भर चन्द्रको छवि खिच्ने बेला हुन्छ। त्यहाँ विचार गर्ने धेरै ज्यामितीय पक्षहरू छन्।
लम्बाइ मा लिब्रेशन। यो तथ्य यो छ कि चन्द्रमाको परिक्रमण आन्दोलन पूर्ण रूपमा एकरूप छ, जबकि अनुवादात्मक आन्दोलन छैन। यसले पेरीजीलाई अंश बनाउँछ जहाँ चन्द्रमाले सब भन्दा चाँडो र अपोजी सब भन्दा ढिलो सार्छ। पृथ्वी र सूर्यको परिक्रमाको साथ यस्तै केही हुन्छ जब यो मा छ एपेलियन र पेरिहेलियन। यस आन्दोलनको परिणाम स्वरूप हामी पश्चिमीतिर स्विंग गर्छौं जसले गर्दा हामी चन्द्रमाको पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रमा केवल एउटा मात्र अनुहार देख्न सक्छौं।
यो भन्न सकिन्छ कि चंद्र लिब्रेसन भनेको बिन्दु हो जुन चन्द्रमाको सतहमा अवस्थित हुन्छ र जहाँ types प्रकारको लिब्रेसन देखा पर्छ। स्पष्ट रूपमा यसले सर्पिल फेसनमा स्थानान्तरण गर्दछ र यसको मूल स्थितिमा फर्कदैन।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीले तपाईंलाई चन्द्रमाको चाल बारे अझ बढी जान्न मद्दत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » चन्द्रमाको आन्दोलन